Nhau - KES mhiri kwemakungwa Bhizinesi reDhipatimendi rekuvaka zviitiko- ski
Musi waZvita 12, KES bhizinesi rezvemabhizimisi mhiri kwemakungwa akaronga zviitiko zvekuvaka zvikwata zviitiko, panguva yedenda re COVID-19, vanotarisira kuti vese vashandi vanogona kuramba vakasimba uye vakagwinya, vachiomerera mukuita maekisesaizi, kuramba kutonhora nehutachiona, vachienderera mberi nekupa basa riri nani mhiri kwemakungwa. vatengi.
Nguva yechando iri kuuya, yakanaka Beijing inogamuchirawo mafirita echando, vashandi vanobva kuKES vakanakidzwa nemhemberero munyika yechando nesinou. Vakanga vachikwiza nemufaro, vachitamba nhabvu dzechando, vachinzwa kumhanya uye kushuvira kweakanyanya chando ruzivo muBeijing Pinggu Yuyang ski resort.
Skiing ndiwo mutambo wechando wekunze nemitambo ine simba. Ski maitiro, sekureba sekumira kwechikepe, uye kuburikidza nekubatana kwemaoko nemakumbo, pamwe nehunyanzvi hwetekinoroji, iwe unogona kutenderera kusvetuka pachando!
Ski timu yekuvaka zviitiko, ita kuti vashandi vasimbise timu basa mweya pakuziva mukukwikwidzana, kubatana, kupokana kwakazara, rega vashandi vese vazivane zvakanaka, vadzidze kuti vanzwisise zviri nani kambani yekambani tsika, panguva imwe chete, farira chando rega mushandi wega wega anzwe kunyatso chengeta vashandi uye kugona kwavo kubatsira mukuvandudza kwekambani kunotevera
KES inopa N95 masks emahara uye unonunura iwo nemaodha.